China Home Pet Pet Hair Hair Remover Dog Hair Cleaner Carpet Bed sofa Fanesorana volo sy orinasa mpanamboatra | MiaSein
Anaran'ny vokatra: Mpanala volo saka saka fanesorana volo alika mpanadio volo karpet fandriana fanesorana volo
Description: Mety amin'ny fanadiovana volo marobe izy io, ary mety amin'ny fanadiovana volo biby fiompy latsaka avy amin'ny lambam-pandriana, karipetra, sofa ary akanjo. Borosy fanadiovana roa làlana, volo saka ary volo alika, azo kosehina daholo. Tsotra, mety ary azo ampiasaina indray
Anaran'ny singa: vokatra fanadiovana sy hatsaran-tarehy hafa
Fampiasana: afaka mihodina sy miverina mivantana amin'ny lafin'ny lambam-pandriana, karipetra, akanjo ary sofa izy mandra-pahatongan'ny zavatra voafatotra etsy ambony. Diovy avy eo ary arotsaho ny volo ao anaty fitoeram-pako. Farany, diovy ny milina fametahana azy
Loko: fotsy sy mena
Size (amin'ny cm): 19cm * 20cm
Endri-javatra: manadio volo biby
Fitaovana: ABS, fibre nylon
Fomba fanasan-damba: ity vokatra ity dia azo sasana ihany. Azafady azafady amin'ny servieta maina aorian'ny fanasana azy. Diovy azafady amin'ny lahatsoratr'olombelona azafady
Karazan-tahiry: Ao amin'ny stock。 Ity vokatra ity dia afaka manosotra ny volo niraikitra tamin'ny akora matevina fotsiny amin'ny sofa, karipetra, lambam-pandriana ary akanjo, fa tsy afaka manadio ny volo.
Mariho azafady: Ity vokatra ity dia noforonina sy novokarin'ny orinasa irery. Ity vokatra ity dia tsy afaka manadio ny volo niraikitra tamin'ny volon-koditra amin'ny sofa, karipetra, lambam-pandriana sy akanjo ihany, fa tsy afaka manadio ny volon'ny volo. Tsy manohana ny fanaingoana azy ity vokatra ity. Aza apetraka amin'ny toerana ahazoan'ny ankizy azy ny vokatra. Aza omena ny ankizy ny vokatra. Ity vokatra ity dia maranitra kokoa, azafady sorohy ny mikasika ny ankizy sy milalao, azafady mba hanafatra arakaraka ny tena zava-misy amin'ny biby. Rehefa ampiasaina dia mba diovy tsara ny volo mba tsy hanimba ny hoditry ny biby ary hiteraka korontana aminao sy ny biby fiompinao. Azafady mba diovy araka ny fomba fanadiovana. Raha tsy afa-po amin'ny vokatra ianao dia mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Previous: Alika Puppy Alika vavy Teddy Bichon landy palitao Chihuahua Bulldog Corgi zanak'alika kely matevina biby fiompy fararano sy akanjo ririnina
Manaraka: Akanjo alika amin'ny fararano sy ririnina dia niova ho fizarana manify Teddy Bichon Hiromi Poodle Akanjo An'alika Alika Puppy T-tongotra efatra T-shirt Cross Cross Wukong Pet Coat
Pet Double Bowl mandeha ho azy Water Dispenser Preve ...